Konke oku ndiza kukunika: iyelenqe eligcwele iimfihlakalo, ukungohlwaywa nokunyoluka | Uncwadi lwangoku
Konke oku ndiza kukunika yincwadi yesihlanu yombhali waseBasque uDolores Redondo, yapapashwa ngo-2016. Yincwadi yolwaphulo-mthetho esekwe kwiGalician Ribeira Sacra, icebo layo lizele ziimfihlakalo, ukungohlwaywa nokunyoluka. Ngalo msebenzi umbhali woncwadi uphumelele uHlelo lwama-65 lweBhaso lePlaneta, emva kokubonisa umbhalo-ngqangi onegama Ilanga leThebes, naphantsi kwegama elinguJim Hawkins.
Ukongeza kwibhaso elibalulekileyo elikhankanyiweyo, uRedondo waba ngumbhali wokuqala waseSpain ukufumana iBancarella Award (2018), kwinguqulelo yesiTaliyane yale ncwadi. Kunyaka omnye kamva, indawo yangoku ishishini Insider ukhethe inoveli njengommeli wephondo laseLugo, kwinqaku elinesihloko esithi: "Uhambo lokubhala ngeSpain yoSuku lweeNcwadi", ebhalwe nguAna Zarzalejos.
1 Isishwankathelo kuko konke oku ndiza kukunika (2016)
2 Uhlalutyo lwako konke oku ndiza kukunika (2016)
2.2 Imixholo eyahlukeneyo
2.3 Iimbonakalo zomhlaba weGalician Ribeira Sacra
2.4.4 UAndres Nogueira
3.1 Ukufikisa kunye nezifundo zobungcali
3.2 Umsebenzi njengompheki
3.3.1 Iinoveli zikaDolores Redondo
Isishwankathelo se Konke oku ndiza kukunika (2016)
Konke oku ndizakunika...
Ngenye intsasa, UManuel wabhala ukuphela kwencwadi yakhe yokugqibela: Ilanga leThebes; ngequbuliso kunkqonkqozwa emnyango, kwaye xa uyivula iyadibana oonogada bakarhulumente ababini. Iiarhente zambuza kwangoko ukuba usisihlobo sika-vlvaro Muñiz de Dávila, kwaye emva kokuqinisekisa ukuba ngumyeni wakhe, bayamazisa ngesiganeko esibi: u-Álvaro wafumana ingozi yezithuthi eGalicia apho ngelishwa lakhe wasweleka khona.
Ndichaphazeleke kakhulu kwaye kwangaxeshanye UManuel uya eRibeira Sacra. Ukufika, uqinisekisa ukufa kothando lobomi bakhe, Kwaye ngaphandle kokukhathazeka malunga nokwenzekileyo, ityala lalisele livaliwe. Ngelixa elapho, uza kuqala ukufumana iinkcukacha zobomi bomyeni wakhe ongasekhoyo, enye yazo yeyokuba usapho lwasebukhosini lwaseGalicia, oluhlala kwiphondo apho zenzeka khona iziganeko.
Waliwe ngabazala bakhe, wazifaka phakathi kosizi, UManuel sele eza kubuya xa efunyanwa nguNogueira, umlindi woluntu odla umhlala-phantsi. Oku kuphakamisa ukukrokrela kwakhe ngokunxulumene neli tyala, elivusa kuye amathandabuzo amatsha ngokufa kweqabane lakhe kunye nosapho oluyimfihlakalo. Ukurhanela kunye nokuqonda kwalowo wayesakuba ligosa, kunye nomnqweno onzulu kaManuel kunye nomsindo, kuya kubakhokelela ekubeni babuze ngengozi "ekucingelwa ukuba".
Uphando luza kudityaniswa ngumfundisi uLucas, owongamele umngcwabo kwaye wayengumhlobo womfi ongasekhoyo. Ngokuthe ngcembe, kuya kuvela iinkcukacha ezintsha nezothusayo ngo-Álvaro — owayephila ubomi obumbaxa —, nto leyo enokubangela ukufa. Esi sithathu siza kubangela isiphithiphithi esikhulu kusapho oluhloniphekileyo, oluya kuzama ukubathintela ekufikeleleni enyanisweni; kodwa iinzame zakho ziya kuba lilize.
Uhlalutyo Konke oku ndiza kukunika (2016)
Yincwadi yolwaphulo-mthetho Inqanaba labo lokuqala yiMadrid, kodwa emva koko bafudukela eChantada, kwiphondo laseLugo eGalicia. Incwadi inento encinci kune Amaphepha ayi-600, yahlulwe yaba Izahluko ezi-47 uxelele umntu wesithathu ngumbali owazi yonke into. Iploti ngayo zilungelelaniswe kakuhle kwaye ityhilwe kwidriphu, egcina iyelenqe ukusukela ekuqaleni, kude kube sisiphelo esimangalisayo.
Ibali eli lijongana nemicimbi eliqela, kubandakanya nophando lwengozi, eqhutywa ikakhulu ngumlinganiswa ophambili kunye namahlakani akhe amabini. Nje ngeziphumo, iimfihlo ezininzi, ubuxoki kunye nezenzo ezingekho mthethweni zosapho oluhloniphekileyo ziya kuvezwa kwaye ihlonitshwe ngabemi. Ikwabonisa inkcubeko kunye nezithethe ezininzi zaseGalikhi, zombini ezaseburhulumenteni nezenkolo.
Iimbonakalo zomhlaba weGalician Ribeira Sacra
Kule noveli, Umbhali ukhethe iGalicia njengesimo sophuhliso lwabalinganiswa. Ibali linikezelwe kwi-pazo de los marquises de Santo Tomé, indawo ebubuxoki kodwa iyafana kakhulu nephondo laseLugo. Intsimi inentiyo kwaye iyabanda ngenxa yemozulu yayo, kodwa ngeendawo ezintle nezintle, ezichazwa nguRedondo ngokweenkcukacha kule ncwadi.
Ungusomashishini, osweleke ekuqaleni kwesiqwenga sebali; Uza kuba yeyona nto iphambili ebalini. Kwindawo yokuqala, ngenxa yokufa kwakhe okungummangaliso; Okwesibini, kubomi bakhe obufihlakeleyo. Njengoko inoveli iqhubeka, izalamane zakhe-eziyinxalenye ye-aristocracy yase-Galician- kunye nezizathu ezamnyanzela ukuba akhokele ubomi obubini obahlukileyo ngaxeshanye ziya kwaziwa.
Ungumbhali, owaphakama waduma ngenxa yenoveli yakhe yokuqala kwaye utshatile no-vlvaro. UManuel uza kudlula kumanqanaba aliqela, ukusuka ekuchaseni umsindo emva kokufumanisa iimfihlo zomyeni wakhe. Ubunyani bakho buza kutshintsha ngokupheleleyo ngenxa yokusweleka kwakhe; ndinosapho olutsha, ilifa elikhulu kunye neengcinga ezininzi ezonyusa imeko-bume enobutshaba.
Ungutata ongumKatolika kwaye ungumhlobo osenyongweni ka-Álvaro, ukunyaniseka kobuhlobo bokwenyani kuya kubonakala kubo. ULuka izakunika inkxaso engenamiqathango kuManuel kwaye iyakumkhumbuza ukuba wayemazi Álvaro wokwenene. Ukongeza, ngalo mlinganiswa umbhali ubonakalisa iimeko ezimanyumnyezi ezonzakalisa icawe nezingazukuvela.
Uleligosa elidla umhlala-phantsi kwi-Spanish Civil Guard, indoda eyayinesiko losapho, enemilinganiselo engqongqo. Lo mlinganiswa Uya kuba nenkxaso enkulu kuManuel kwimibuzo malunga nokusweleka kuka-vlvaro. Ngenxa yala mava uya kuguquka, kwaye uya kuba ngumntu onyamezelayo.
Ibinzana nguDolores Redondo.
UMaria Dolores Redondo Meira Wazalelwa eDonostia - eSan Sebastián, ngoMgqibelo ngoFebruwari 1, 1969. Uyizibulo kumtshato waseGalician; uyise, umatiloshe; kunye nonina, umfazi wendlu. Wayenobuntwana obaphawulwa ngokukhala kunye nentlungu, kuba eneminyaka eyi-5 waphulukana nodadewabo omncinci. Ngawo la mathuba obumnyama umbhali wavuma ukuba wayebalekele ekufundeni ukuze athintele le duel.
Ukufikisa kunye nezifundo zobungcali
Kwasebutsheni wayenomdla kuncwadi; los Uneminyaka eli-14 ubudala wabhala amabali akhe okuqala kwaye kamva wathatha inxaxheba kukhuphiswano olwahlukeneyo kule ndima. Ngokuhambelana nomsebenzi wakhe njengombhali, waqala izifundo zakhe kwezomthetho kwiDyunivesithi yaseDeusto, ikhondo awaye wagqiba kwelokuba alitshintshele kolunye ubizo lwakhe: ukupheka; ke wafunda kwaye waphumelela ekubuyiseni kwesisu.
Kwiminyaka engama-24 kuphela ubudala, wayesele engumpheki kwishishini lakhe, indawo encinci ebekwe eSan Sebastián. Emva kweminyaka emibini yokusebenza nzima kunye nokufunda okuninzi, uthathe isigqibo sokuyivala ngenxa yokunqongophala kwemali, kuba izinto azihambanga njengoko bekulindelwe. Emva kwexesha, uqhubeke nomsebenzi wakhe wokupheka kwezinye iivenkile zokutyela, sele ekhululekile kwaye engenalo uxanduva okanye amaxhala.
Ngo-2009, umbhali waseSan Sebastian wapapasha inoveli yakhe yokuqala Amalungelo engelosi. Kwiminyaka emine kamva, Umsebenzi wakhe uthathe i-180 degree degree, xa wazisa umdlalo Umgcini ongabonakaliyo (2013) aqala ngayo I-Baztán trilogy. Le saga ngokukhawuleza yaba yinto yokubhala, nangaphezulu Iikopi ezingama-700.000 zithengisiwe kwaye yaguqulelwa kwiilwimi ezingaphezu kwama-30 kwihlabathi liphela.
Emva kwale mpumelelo intle, iilitha esidlangalaleni Konke oku kuyakwenza Ndiza kunika (2016), Inoveli athe wamkela yona Ibhaso leplanethi kwakuloo nyaka. Ngo-2019, yabonisa Ubuso basemantla bentliziyo, i-prequel kwi I-Baztán trilogy Ekuqalekeni kwekhondo lomsebenzi we-protagonist yesaga, Amaia Salazar, ityhilwa kubafundi.
Iinoveli zikaDolores Redondo
Umgcini ongabonakaliyo (2013)
Ilifa kuMathambo (2013)
Unikelo lwesaqhwithi (2014)
Konke oku ndiza kukunika (2016)
Ubuso boMntla beNtliziyo (2019)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » Konke oku ndiya kukunika